सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार सम्बन्धमा फेरि सोधपूछ, के भने सीईओहरुले? - Technology Khabar
» सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार सम्बन्धमा फेरि सोधपूछ, के भने सीईओहरुले?
सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार सम्बन्धमा फेरि सोधपूछ, के भने सीईओहरुले?
फेसबुक, गुगल तथा ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी क्रमश: मार्क जुकरबर्ग, सुन्दर पिचाइ तथा ज्याक डोर्सीलाई अमेरिकी राजनीतिज्ञहरुले दुष्प्रचारलाई बढावा दिएको भन्दै सोधपूछ गरिरहेका छन्।
पछिल्लोपटक भएको सुनुवाइ अमेरिकी संसदमा ट्रम्प समर्थकहरुको प्रदर्शनपछिको पहिलो हो र यसले सामाजिक सञ्जालका क्षेत्रमा दरिलो नियमन आउन लागेको इंगित गर्दछ।
उनीहरुले अनलाइन प्लेटफर्ममा तेस्रो पक्षले राखेका सामग्रीको दायित्व पनि प्लेटफर्मले नै लिनेगरी विधेयक परिवर्तन गर्न लागेको बताएका छन्।
सुनुवाइको यो सत्र सभापति माइक डोयलले तीनवटै सामाजिक सञ्जालका सीइओहरुलाई अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमण र प्रदर्शनीमा उनीहरुको उत्तरदायित्व छ कि छैन भन्ने प्रश्नबाट भएको थियो। उक्त प्रश्नको उत्तर तीनजनामध्ये कसैबाट आएन।
उनले १२ ओटा खोपविरोधीहरुलाई पनि तीद्द वटै प्लेटफर्मबाट हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटमसहितको चुनोती दिएका छन्। ती खोपविरोधीहरुले खोपका बारेमा ६५ प्रतिशत गलत सूचना दिएको उनको आरोप छ।
सुनुवाइका क्रममा फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले युट्युब र ट्विटरभन्दा एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो प्लेटफर्ममा सीमित सुधारको प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘केही अवैधानिक सामग्री प्रचार प्रसारमा रोक लगाउन तथा यिनीहरुसँग लड्न कंग्रेसले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो विश्वास छ।’
यसैगरी गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाइले युट्युबले २०२० भरी मतदाताहरुलाई गलत सूचना दिने सामग्री राख्नेहरुलाई पहिचान गरी यस्ता सामग्री हटाउन लागि परेको बताए। उनले दफा २३० लाई हटाउँदा अनिच्छित परिणाम आउन सक्ने र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्लेटफर्महलाई चुनाैतीहरुका बीच युजरहरुको बचावटका लागि उत्तरदायी कदम चाल्नबाट रोक लगाउने बताए।
रियलमीको नयाँ फोन भी१५ जनवरी ७ मा सार्वजनिक हुने